ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်ညီလာခံ အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီး
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်ညီလာခံ အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီး
(၂၆. ၁. ၂၀၁၃) ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်ညီလာခံကို ပျဉ်းမနား မြို့နယ်ညီလာခံကျင်းပရေးကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး ဦးခင်မောင်ဇော်၊ ဦးသန်းဝေ၊ ဦးဇင်ဘို၊ ဒေါ်ရီရီမြင့်၊ ဦးသာချို၊ တိုင်းညီလာခံကျင်းပရေးကော်မရှင် ဦးသန့်ဇင်၊ ခရိုင်ညီလာခံ ကျင်းပရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်း နိုင်ဦးတို့မှ လာရောက်ကြီးကြပ်၍ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ သဘာပတိအဖြစ် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ် တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန္ဒာမင်းမှ ဆောင်ရွက်ပြီး အခမ်းအနားသို့ မြို့နယ်ညီလာခံကိုယ်စားလှယ် (၃၃) ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားကို နေ့လည် (၂း၀၀) နာရီတွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
တက်ရောက်လာသည့် မြို့နယ်ညီလာခံကိုယ်စားလှယ် (၃၃) ဦးအနက်မှ မြို့နယ်အလုပ်အမှုဆောင် (၁၅) ဦးကို အောက်ပါအတိုင်းရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
၁။ ဦးမောင်မောင်ဆွေ (ခ) ကိုဆွေ - ဥက္ကဋ္ဌ
၂။ ဦးတင့်လွင် - ဒု ဥက္ကဋ္ဌ
၃။ ဦးညီညီ - အတွင်းရေးမှူး
၄။ ဦးနောင်နောင်အောင် - တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
၅။ ဦးထွန်းနိုင - ဘဏ္ဍာရေးမှူး
၆။ ဦးတင်နိုင်မိုး - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး
၇။ ဒေါ်စန္ဒာမင်း - အဖွဲ့ဝင်
၈။ ဦးလှဝင်းခိုင် - ။
၉။ ဦးချစ်စမ်းမောင် - ။
၁၀။ ဦးစောညို - ။
၁၁။ ဒေါ်မျိုးပပထွန်း - ။
၁၂။ ဦးအုန်းသော် - ။
၁၃။ ဦးတင်သိန်း - ။
၁၄။ ဦးထွန်းထွန်း - ။
၁၅။ ဦးရန်နောင်စိုး - ။
၁။ ဦးထွန်းမြင့်အောင် (ခ) ညီညီ
၂။ ဦးမောင်မောင်ဆွေ (ခ) ကိုဆွေ
Daw Sandar Min (Shwee)